धुर्मुस जी ! नमुना नेपाल बनाउने भनेर दिएको चन्दा कहाँ गयो ?’ - धुर्मुस जी ! नमुना नेपाल बनाउने भनेर दिएको चन्दा कहाँ गयो ?’
२०७५, २५ माघ, 12:51:49 PM
धर्मुसेलाई ‘माग्ने’ बनाई जनतासँग मागेको पैसाले क्रिकेट रंगशाला बनाउनु थियो भने यो देशमा गणतन्त्र किन ल्याएको ? पंचायतकालमा पनि कलाकारहरुले चन्दा उठाएर धेरै ठाउँमा पंचायत रजत स्तम्भ र द्वारहरु बनादिएकै थिए, एउटा रंगशाला पनि बनाइदिन्थे ।
जनयुद्धका नाममा बीसौं हजार नेपालीको बेफवाँकमा ज्यान गयो । आज ‘गणतन्त्र हामीले नै ल्याएका हौं’ भनेर दावी गर्नेहरुले तिन अर्बको जाबो एउटा रंगशाला बनाउन धुर्मुसेको सहारा लिनु लज्जाको विषय हो कि हैन ?
मुलपानीको बन्दाबन्दै अलपत्र परेको रंगशालालाई पूर्णता दिउँ । धुर्मुसे चन्दा माग्न आएमा सोधौं, ‘नमुना नेपाल बनाउने भनेर दिएको चन्दा कहाँ गयो ?’
हामी जनताको स्वार्थ चाहिं के त ? हामीले रंगशाला बनेर के पाउने ? के टिकट फ्रि हुन्छ ? के त्यो संरचनाको शेयर पाइन्छ ? के रंगशालाबाट उठेको रकम जन हितमा खर्च हुन्छ ? थोरै रकम सरकारको खातामा राखेर बाँकी रकममा ने क पाका ठेटनाहरुले मस्ती मार्ने न हो । अनि किन दिने चन्दा ?
धुर्मुसे ब्रो, हामी त सुको चन्दा दिन्नौं । यस्तो धन्दा छाड र फिल्म बनाउनतिर लाग । छक्का पन्जा नै गर्ने हो भने दिपकराज र दिपाश्रीले झैं हरेक वर्ष पर्दामै छक्का पन्जा गर न । कर्म पनि भो, कमाइ पनि भो ।